Izimali ezikhokhelwa Izikhungo zokukhokhela izikhungo ze-GAZİBİS kanye nokuThunyelwa kwelungu | RayHaber | Isitimela | Umgwaqo omkhulu | ikhebula imoto
IkhayaTURKEYUmfunda-mpumalanga we-Anatolia RegionI-27 GaziantepIzimali ezikhokhelwa Izikhungo zokukhokhela izikhungo ze-GAZİBİS kanye nokuThunyelwa kwelungu
Izimali ezikhokhelwa Izikhungo zokukhokhela izikhungo ze-GAZİBİS kanye nokuThunyelwa kwelungu
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş I-27 Gaziantep, Umfunda-mpumalanga we-Anatolia Region, JIKELELE, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, TURKEY 0
izintela nokushintshwa kwamalungu
Umasipala waseGaziantep Metropolitan, ukuze kukhuthazwe ukusetshenziswa kwamabhayisekili njengendlela yokuhamba kanye nezinjongo zokuzijabulisa nezemidlalo; I-GAZİBİS ihlose ukusabalalisa uhlelo lwe-Bisiklet Smart Bikingcle Sharingcle Gaziantep kulo lonke elaseGaziantep, ngaleyo ndlela inikeze ukuthutha okunempilo futhi okuthanda imvelo kubo bonke abathandi bamabhayisekili.
Ngohlelo lwe-Smart Bike Sharing System, abathandi bezithuthuthu ngeke kudingeke baphathe amabhayisikili abo, bangaqasha amabhayisekili eziteshini ze-GAZİBİS bawashiye kunoma yisiphi isiteshi se-GAZİBİS.
Luyini uhlelo lwe-Smart Bike?
Kuyindlela eqhubekayo yokwabelana ngebhayisekili esebenza njengezinye izindlela zokuhamba zabathandi bamabhayisekili emadolobheni amaningi, kuqeda isidingo sokuthwala amabhayisekili ngokusekelwa ngedatha yezobuchwepheshe futhi kungahlanganiswa nenethiwekhi yokuhamba edolobheni.
Inhloso yalolu hlelo ukuqinisekisa ukuthi amabanga amade we-3 - 5 km angaqhutshwa ngaphandle kokushayela imoto. Ngale ndlela, umthwalo wezinto zokuhamba zomphakathi kanye nomthelela wamagesi abulala imvelo abulala imvelo uzokwehliswa futhi umphakathi uzoba nethuba lokusebenzisa izindlela zokuhamba kahle futhi ezinemvelo ezungezile.
Ungaba kanjani yilungu le-GAZİBİS System?
I-Kalealti, Inkundla, i-15 Julayi, Manoglu Park (SankoPark), Masal Park, Wonderland kanye nesiteshi saseGaün 7 efakwe nohlelo lwebhayisekili le-108, lungathathwa kuwo wonke amaphuzu okuthengisa iGadiantep Card Card iGaziantep Full Card, eliseBalikli (ngemuva kwe-Omeriye Mosque) iGadiantep Card Cardization Kusetshenziswa ngamakhadi ancishisiwe namakhadi wesikweletu. Akumukelwa ngamakhadi wamahhala. Izinga lehora likhokhiswa njenge-1 TL.
Uma usuvele ulilungu lohlelo lweGazibis, ungadlulisela ubulungu bakho kwiKhadi le-Gaziantep. Ukuphela kokufanele ukwenze ukubhalisela uhlelo lwakho lweGazibis neKhadi lakho leGaziantep ngokusebenzisa ifomu le-inthanethi ongaligcwalisa ngemizuzu ye-5.
Ngesikhathi sobulungu, ulwazi lomuntu siqu luyatholakala bese kusayinwa inkontileka. Imininingwane mayelana nale mininingwane ingatholwa kusoftware ye-kiosk kanye naseziteshini ezinelebuli yolwazi.
Ukugunyazwa okuvulekile kwe-25 TL kudalwa kusuka ekhadini lesikweletu lokuthenga nge-Card Card, kuthi ngemuva kokubuya kwebhayisekili, ngemuva kokuthi kudonswe imali yokusebenzisa, imali esele iyakhanselwa nenqubo enqunywe yibhange. Amakhadi wesikweletu kumele avulekele ukuthengwa okungokoqobo.
Isiteshi sebhayisekili se7 siqashwe ngamakhamera wonke we-15 online. Ukuphathwa nokunakekelwa kwamabhayisekili e-108 kwenziwa yiGaziulaş.
Amabhayithi athathwe kunoma yisiphi isiteshi angashiywa kwezinye iziteshi. Amabhayisikile we-3 angaqashwa ngekhadi lesikweletu futhi yi-1 kuphela engaqashwa yiGaziantep Card. Isikhathi sokubuya ngemuva kokuthengwa kwebhayisikili sikhawulelwe emahoreni we-24. Esimweni sokuphelelwa isikhathi kwe-24, kuzoqulwa amacala obugebengu selokhu kubhekwa umzamo wokuthathwa, okufakwe kusivumelwano.
QAPHELA: Insizakalo yobulungu kwifomu le-inthanethi isebenza kuphela kulabo ababhaliswe eGaziantep. Labo ababhaliswe kwamanye amadolobha kumele beze eGaziantep Card Central Branch benze ubulungu babo neGaziantep Card. Ukubhalisa kusuka eGaziantep Card Processing Center kumahhala, kwanele ukuba nekhadi lakho lomazisi kanye neKhadi le-Gaziantep. Uma ungenalo i-Gaziantep Card okwamanje, kungenzeka ukuyithola esikhungweni se-Gaziantep Card Transaction Center ngemali ethile.
Ubulungu be-GAZIBIS ngeKhadi le-Gaziantep
IGazibis manje isisistimu yeKhadi le-Gaziantep Card. Ungasebenzisa ikhadi lakho le-Gaziantep Card (ngaphandle kwamahhala / izinhlobo zamakhadi wamahhala) ozisebenzisa ngebhasi, tram nezinye izinto ezifakiwe zokuqasha amabhayisekili avela eGazibis.
Uma usuvele ulilungu lohlelo lweGazibis, ungadlulisela ubulungu bakho kwiKhadi le-Gaziantep. Ukuphela kokufanele ukwenze ukubhalisela uhlelo lwakho lweGazibis neKhadi lakho leGaziantep ngokusebenzisa ifomu le-inthanethi ongaligcwalisa ngemizuzu ye-5. Manje usungaqala kulezi zinketho ezilandelayo.
Uma unemibuzo mayelana nefoni ye-0342 329 45 45 kanye ne-0533 784 27 27 ungathola ukwesekwa okusheshayo kusuka kwimigqa ye-whatsapp.
QAPHELA: Insizakalo yobulungu ngefomu le-inthanethi isebenza kuphela kulabo ababhalise ngokuhlala eGaziantep. Abahlala kwamanye amadolobha bayacelwa ukuthi baye eGaziantep Card Central Branch benze ubulungu babo neGaziantep Card. Ukubhalisa kusuka eGaziantep Card Processing Center kumahhala, kwanele ukuba nekhadi lakho lomazisi kanye neKhadi le-Gaziantep. Uma ungenalo i-Gaziantep Card okwamanje, kungenzeka ukuyithola esikhungweni se-Gaziantep Card Transaction Center ngemali ethile.
GAZİBİS Indlela Yokuqasha?
Ungayithenga Kanjani Ibhayisekili ElineKhadi le-Gaziantep kusuka esiteshini se-GAZİBİS?
1. ISINYATHELO:Ukukhetha Uhlobo Lokusebenza: Qhafaza inkinobho ye-Al Buy Bikingcle.
2. ISINYATHELO : Isaphulelo se-Gaziantep noma iKhadi eligcwele UMCULI WEKHADI indawo. Le nqubo ithatha imizuzwana eyi-5.
ISINYATHELO 3:Faka iphasiwedi yakho yeKhadi le-Gaziantep Card. (Le phasiwedi yathunyelwa kwifoni yakho ephathekayo ngesikhathi sokubhaliswa ku-inthanethi.)
ISINYATHELO 4:Uma ikhadi lakho lingavinjelwe futhi unebhalansi eyanele (okungenani i-5 tl) uhlelo luzokunikeza ibhayisekili. Ungabona inombolo yebhayisekili esikrinini. Uhlelo lukhetha ibhayisikili uqobo.
ISINYATHELO 5:Ungathatha ibhayisekili ngenombolo ekhonjiswe esibukweni ngokuyiphakamisa kusuka endaweni yokukhiya phakathi kwemizuzwana ye-20. Izibani ze-LED ezibomvu okhiye kufanele ziphenduke ziluhlaza. Uma i-20 ingemukelwa ngemizuzwana, uhlelo luzokhiyelwa. Kulokhu, phinda inqubo. Ayikho inkokhelo eyengeziwe.
ISINYATHELO 6:Bheka ukuqina kwebhayisekili ngemizuzwana ye-60 ngemuva kokulithatha. Uma kungenankinga ungaqala ukuyisebenzisa. Sicela uyibuyisele uma kukhona iphutha. I-60 imahhala kusuka kubhashi elibuyisiwe ngemizuzwana. (Sicela ubheke ibhayisekili ofuna ukuyithenga kuqala.)
QAPHELA: Ungenza futhi izinyathelo ezingenhla ngenkinobho ye-'BUY NGOKUKHETHA I-BICYCLE '.
LAPHO UKHETHA; Ekupheleni kokuhlinzwa, ngemuva kokuthi ulwazi lwempumelelo yokusebenza luboniswe esikrinini, iya ku-bike oyicacisile bese uthatha ibhayisekili kusuka kusitebhisi. Kungathengwa i-1 (eyodwa) kuphela nekhadi lobulungu.
Ungayithenga Kanjani Ibhisikidi Ngekhadi Lesikweletu kusuka GAZİBİS Station?
Mina 1.A:Ukukhetha Uhlobo Lokusebenza: Inkinobho Yokuthinta “Thenga ikhadi Lesikweletu”.
2. ISINYATHELO:Faka inombolo yakho yocingo esikrinini bese uthinta inkinobho yokuqinisekisa.
3. ISINYATHELO:Faka imininingwane yokungena kwamakhadi wesikweletu nenombolo yamabhayisekili ofuna ukuwaqasha esikrinini, bese uthinta inkinobho ethi Qinisekisa.
4. ISINYATHELO:Faka ikhodi yokuqinisekisa ethunyelwe kwifoni yakho nge-SMS bese uthinta inkinobho yokuqinisekisa.
5. ISINYATHELO:Faka izinombolo zebhayisekili ofuna ukuziqasha bese ucindezela inkinobho ethi Qinisekisa.
6. ISINYATHELO:Ngemuva kwemininingwane yokuthengiselana ephumelelayo kuvela esibukweni, iya kumabhayisikili owacacisile bese ususa ibhayisekili kusuka kusite phakathi kwemizuzwana ye-20 Izibani ze-LED ezibomvu okhiye kufanele ziphenduke ziluhlaza. Uma i-20 ingemukelwa ngemizuzwana, uhlelo luzokhiyelwa. Kulokhu, phinda inqubo. Ayikho inkokhelo eyengeziwe.
Ungabuyisa Kanjani Ibhayisekili kuziteshi ze-GAZİBİS
ISINYATHELO 1:Beka ibhayisikili olisebenzisayo kwelinye lamaphoyinti wokukhiya angenalutho. Isiteshi noma indawo yokukhiya ingahluka.
ISINYATHELO 2:Ngemuva kokufaka, linda cishe imizuzwana ye-5 bese ubona ukuthi i-LED endaweni yokukhiya ibomvu.
ISINYATHELO 3:Qinisekisa ukuthi ibhayisekili likhiywe ngokuyiphakamisa kancane. Uma ibhayisekili lingakhiyi, zama enye indawo yokukhiya.
ISINYATHELO 4:Ngemuva kokuthi ukhiye ibhayisekili, sicela ucindezele inkinobho ethi "BICYCLE DROP" ukulahla ibhayisekili lakho kwiKhadi lakho leGaziantep.
(Uma uthengile ngekhadi lesikweletu, uzothola umyalezo obhaliwe kuselula yakho yize ibhasikidi selikhishiwe. Awudingi ukusebenzisa inkinobho ye-IR BICYCLE DROP.)
ISINYATHELO 5:Funda ikhadi lakho le-Gaziantep kumfundi. Lokhu kungathatha kufika kumasekhondi we-3, ungakhiphi ikhadi lakho bese ushiya isiteshi ngaphambi kokuba kuqedwe. (Lokhu kuthengiselana akudingeki uma kutholwa ngeKhadi lesikweletu.)
QAPHELA: Amabhayisikili amasha angeke athengwe ngaphandle kokuthi inqubo yokubuyisa ibhayisekili isiqediwe !!! Ngemuva kokubuya Noma ikhadi lingafundwanga, uhlelo luquma imali ngokuya ngesikathi ibhayisekili libuyelwa kulokhi. Asikho isikhathi esengeziwe esingeziwe.
Uma kunenkinga ngebhayisekili lakho
ISINYATHELO 1:Uma ibhayisikili libonisa noma yiziphi izinkinga, shiya isithuthuthu sibuyele kunoma iyiphi indawo engenamuntu esiteshini kungakapheli umzuzu owodwa (1). Akunazindleko.
ISINYATHELO 3:Qinisekisa ukuthi ibhayisekili likhiywe ngokuyiphakamisa kancane.
ISINYATHELO 4:Ukuthenga ibhayisekili futhi, swayipha ikhadi lakho bese uthatha elinye ibhayisekili lenombolo ekhonjiswe esibukweni.
ISINYATHELO 5:Ngemuva kokubheka ibhayisekili lakho, ungashiya isiteshi.
Sicela ubheke ibhayisekili ofuna ukulithenga !!!
Ukuhanjiswa kwamahhala nge-GAZIBIS
Ukudlula kwakho kokuqala kokugibela amabhasi kamasipala namathikithi asetshenziswa yiGaziulaş mahhala phakathi kwehora lokuqala ngemuva kokuqashwa kwebhayisekili lakho usebenzisa iGadiantep Card yakho. Lokhu kusho ukuthi lapho wenza ingxenye yohambo lwakho ngebhayisekili futhi uyingxenye yezithuthi zomphakathi, ukhokha ibhayisekili kuphela.
ISankopark Gazibis Station
Isiteshi se-Kalealtı Gazibis
Inkundla yezemidlalo Gazibis
Isiteshi se-Wonderland Gazibis
Isiteshi Sesikhungo SaseGazibis
Isiteshi Sentando yeningi
Ukufinyelela imephu ye-Gazibis lapha Chofoza lapha!
Iziteshi ze-SAKBİS, Isheduli Yezimali Nezimali Zelungu
ISheduli Yezimali Yezikhungo Zokushintshwa Kwama-SME kanye Nezimali Zelungu
Iziteshi ze-KAYBİS, Isheduli Yezimali Nezimali Zelungu
Isheduli Yezimali Yezikhungo Zokukhokhela i-BISIM kanye nokuSebenza Kwamalungu
ISheduli Yezimali Yezikhungo Zokukhokhela i-ANTBIS kanye nokuThunyelwa kwelungu